मलार्इ लागेको अन्तिम बिकल्प
यसको बारेमा अब केहि पनि सोच्दिन, लेख्दिन भन्छु ‍- धर नै पाउँदिन् । थाहा छ- मैले जति लेखेँ पनि, चिच्याएँ पनि वा चिन्ता गरेपनि हुने कुरा नभैकन छाड्दैन तर पनि बर्बराउन छाडेको छैन् – मैले । यहाँहरूले अनुमान पनि गरिसक्नु भयो सायद, हो मैले कुरा गर्न खोजेको विषय हाम्रो देशको राजनीतिको विषय ! सत्तामा पुगेर देशमा महाराज बन्ने महत्वकांक्षा पालेकाहरूको विषय !
यहाँहरू धेरैले जस्तै बडो ब्यग्रतापूर्वक मैले पनि आजको दिनलार्इ प्रतिक्षा गरिरहेको थिएँ । लाग्छ, मेरो पर्खाइ यहाँहरूको जस्तै ब्यर्थ बन्न थालेको छ । यो ब्लग लेखिरहँदा आज निश्चित गरिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको १७ औ श्रृङ्खलाको मिति सार्ने वा आजै गर्ने बिषयमा बृहत छलफल चलिरहेको थियो ! लाग्छ, यिनीहरू बैठक चाँहि बस्दछन् तर निर्णय गर्ने क्षमता छैन् यिनीहरूमा ! समय र सामुद्रिक लहरले मान्छेहरूलार्इ पर्खदैन भन्ने तथ्य यिनीहरूले किन बिर्सिरहेका होलान् ? म सधैँ बिलखबन्दमा पर्ने गर्दछु – खास किन अनिर्णित बन्छन् यिनीहरू ?
नयाँ नेपालको दुहार्इ दिदै, राजनीतिमा सधैं किन फोहोरी चालबाजी गर्नमै ब्यस्त हुन सकेका ? ६ महिना बितिसक्यो देश सरकारबिहिन अवस्थामा रहेको तर हुन सकेको छैन् एउटा निर्णय ! समस्या कहाँ नेर छ ? भन्ने बिषयमा यिनीहरूले छलफल चलार्इरहेका छन् बर्षौदेखि तर थाहा पाउन सकेका छैनन् – समस्या एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्नुमा छ ! बुझ पचाइरहेछन् – समस्या आफू भाले हुन खोज्नुमा छ ! र, छ समस्या – राजनीति भनेको सर्वकालिक सत्तामा रहन प्रयोग हुने भर्याङ हो भन्ने बुझार्इमा !
यो राजनीतिभित्रको अराजनैतिक खेलको अन्त्य, शान्ति, संविधान र सुशासनको प्रत्याभूति वा नयाँ नेपालका लागि हामीसँग केही बिकल्पहरू चाँहि अवश्य छन् –
१) प्रत्येक दलका दोश्रो तहका नेताहरूले आफ्नो क्षमतालार्इ बुझेर शिर्षस्थ भनौंदाहरूको नालायकीपनलार्इ खबरदारी गर्ने वा तिनको गलत नेतृत्व, विचार र निर्देशनलाइ अस्वीकृत गर्ने !
२) सम्बन्धित दलका तल्ला तहका नेता तथा कार्यकताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलार्इ महत्वमा राख्नका लागि आफ्ना दलहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने !
३) आम नागरिकहरू एकजुट भएर दलका बिरूद्द अभियान चलाउने, घच्घचाउने वा बहिष्कार गर्ने !
४) सधैंको गाइजात्राको अन्त्यका लागि केहि शर्तहरूसहित पूर्व राजपरिवारलार्इ जनताको समर्थन !वा, ............... *नेताहरूलार्इ गोली ठोक्ने*
(नभूलौं संसारमा थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू छन्)
*यो बिकल्प चाँहि अन्तिम अस्त्र हुनुपर्छ सायद !
कृपया आफ्नो बिचार प्रतिक्रियाका रूपमा ब्यक्त गरिदिनुहोला !
hi nirajan ji nikai ramro lago ra agadi pani upload gardai janu hola hai
धेरै धेरै धन्यवाद कुष्णजी यहाँको प्रतिक्रिया र महत्वपूर्ण समयका लागि !